HomeLadies Specialအမ်ဳိးသမီး​ေတြရဲ႕ ဓမၼတာလာခ်ိန္​ျဖစ္​တတ္​တဲ့ စိတ္ကို ေျပာျပတဲ႔ သႏၱာလႈိုင္
ဒီ​ေန႔မွာ​ေတာ့ ျမန္​မာႏိုင္​ငံ က အမ်ဳိးသမီး ပရိတ္​သတ္​​ေတြ ​ေလးစားအားက်ရတဲ့ ​ေမာ္​ဒယ္​ သႏၱာလိႈင္​ရဲ႕ So what?အစီစဥ္​မွာ ပါဝင္​ျဖစ္​ပံုနဲ႔ အမ်ဳိးသမီး​ေတြ ဓမၼတာလာစဥ္​မွာ ျဖစ္​တတ္​တဲ့ စိတ္​အ​ေျခအ​ေန​ေတြကို ႐ွင္​းျပသြားပါတယ္​
ဒီနေ့မှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံက အမျိုးသမီးပရိတ်သတ်တွေ လေးစားအားကျရတဲ့ မော်ဒယ် သန္တာလှိုင်ရဲ့ So what?အစီစဉ်မှာ ပါဝင်ဖြစ်ပုံနဲ့ အမျိုးသမီးတွေ ဓမ္မတာလာစဉ်မှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ စိတ်အခြေအနေတွေကို ရှင်းပြသွားပါတယ်
“So what? Campaign က အစ်မကို မကြာခင် International women’s day မှာ ထုတ်လွှင့်မယ့် မေးခွန်းနဲ့ အဖြေ စကားဝိုင်းလေးမှာ အစ်မရယ် အေးမြတ်သူရယ် နှစ်ယောက် စကားပြောထားတဲ့ စကားဝိုင်းလေးပေါ့ အမျိုးသမီးတွေ ဓမ္မတာလာတာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဘယ်လိုမျိုး ခံစားကြမလဲ ဘယ်လိုမျိုးအခက်အခဲတွေ ကြုံတွေ့ရတတ်လဲ ဘယ်လိုဖြစ်သင့်လဲ ဒါကဘာလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို သေချာ အသေးစိတ် မိသားစုတွေရှေ့မှာ ဘယ်လိုဖြတ်သန်းရလဲ ဆိုတာကို ဆွေးနွေးထားတဲ့ ပျော်စရာလည်း ကောင်းတဲ့ ရယ်စရာလည်း ကောင်းတဲ့ စကားဝိုင်းလေး စပြီးလုပ်ထဲက ဒီ So what? Campaign နဲ့ လုပ်ခဲ့တာပါ So what? Campaignရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ အမျိုးသမီးဆိုတာ အမျိုးသမီးဖြစ်လာရင် ဒါဟာ ဂုဏ်ယူစရာပါ အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ ဓမ္မတာလာတာဟာ အမျိုးသမီးတွေအတွက် ကျန်းမာရေးညီညွတ်တဲ့ ဂုဏ်ယူစရာတစ်ခုပါ ရှက်စရာ မဟုတ်ပါဘူး ဆိုတာကို မြန်မာအမျိုးသမီးတွေ ဂုဏ်ယူတတ်အောင် ရှက်စရာကြောက်စရာမလိုပဲ ကိုယ်လုပ်စရာရှိတာတွေကို ဒီအရှက်အကြောက်တရားကြောင့် အနှောင့်အယှက်တွေဖြစ်ပြီး လုပ်စရာရှိတဲ့အရာတွေကို မလုပ်နိုင်မှာတွေကို အစ်မတို့က ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ ကာကွယ်ပေးပြီးတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုရှိအောင် မြှင့်တင်ပေးတဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ပါ ဒီ so what? Campaign ဘယ်လောက် သွားမလဲ အထိ အစ်မကနောက်ကနေပြီး supportလုပ်ပေးဖို့. ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်”လို့ so what? Campaign အကြောင်းနဲ့ပတ်သတ်ပြီး Campaign ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေကို ပြောပြပေးသွားပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး ဓမ္မတာလာနေချိန်မှာ အိမ်ထောင်ရေးအဆင်ပြေမှုရှိဖို့ အတွက် ဘယ်လိုလုပ်သင့်လဲဆိုတာကို သူမအနေနဲ့ ” အဲ့ဒါကတော့ အမျိုးသားကြားရင်တော့ စိတ်ဆိုးလိမ့်မယ် အမ ဓမ္မတာလာရင် သူလည်းလာတယ်၊အမစိတ်ဖောက်ရင် သူလည်းလိုက်ဖောက်တယ်၊ အစ်မက စိတ်တိုရင် သူလည်း အပြိုင်တိုတယ် အခုအဲ့တော့ အစ်မက ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ ဒီ Campaignကို ပြပြီးတော့ အစ်မရဲ့ အမျိုးသားကို ဒါက တစ်ကယ်ကြီးကို သူ့စိတ်ထဲမှာ ဒီအမျိုးသမီးတွေက ရာသီလာတဲ့ အချိန် စိတ်တိုတာ စိတ်ဖောက်တာက အလကားအပိုတွေ အခွင့်ကောင်း လိုချင်လို့ ဒါကြီးကို အခွင့်အရေးတစ်ခုအနေနဲ့ ယူပြီးတော့ သက်သက်မဲ့ လုပ်နေတာလို့ သူက ထင်နေပုံရတယ်။
အဲ့တော့ အစ်မက ဒီအမျိုးသမီး ရာသီလာတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တင်လိုက်တဲ့ အစ်မရဲ့ social influence pageလေးမှာ တင်လိုက်တဲ့ အခါမှာ အမျိုးသမီးတွေ အများကြီး လာပြီးတော့ ရေးကြတယ် တစ်ခါတစ်လေ လူသတ်ချင်စိတ်ပေါက်တယ်တဲ့ အကြောင်းအရာမရှိပဲ စိတ်တိုတယ် ငိုချင်တယ် တစ်ချို့တွေကျတော့လည်း အသိတရားရှိပြီး ကိုယ်ချင်းမစာနာတဲ့ အမေ နှမချင်း မစာနာတဲ့သူတွေကျတော့ လက်ဖက်ကျွေးပစ်မယ်တို့ ဘာတို့ ဒါ မသိလို့ရေးတာမဟုတ်ဘူး သိသိကြီးနဲ့ သက်သက်မဲ့ အကြင်နာတရား မရှိတဲ့လူတွေ ရေးသွားတဲ့ Commentတွေတော့ရှိတယ် အဲ့ဒါမျိုးတွေကျတော့ အစ်မက လက်မခံဘူး ဖျက်ပစ်တယ် ဒါလည်း တစ်ခုနှစ်ခုလောက်ပါပဲ ဒါပေမယ့် တစ်ကယ်ရေးသွားတဲ့သူအကုန်လုံးက အကြင်နာကို နားလည်မှုကို လိုချင်လို့ တောင်းဆိုနေကြတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ အများကြီးရှိနေတာကို တွေ့ရတယ် အဲ့တော့ အစ်မက အမျိုးသားကို commentတွေ သွားဖတ်ကြည့်ဆိုတော့ သူမဖတ်ရဲဘူး ရတယ်တဲ့ ပြီးရင်ဖတ်မယ် ပြီးရင်ဖတ်မယ်နဲ့ အဲ့ဒီတော့ ဒီဟာတွေက ကိုယ်တစ်ယောက်ထဲ မဟုတ်ပဲ အမျိုးသမီးတွေ အကုန်လုံးက တောင်းဆိုနေတဲ့ အရာဆိုတာကို သူသိသွားတဲ့ အချိန်မှာ ဒါကနောက်ဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်ပေါ့ နောက်လကနေစပြီးတော့ သူဘာဖြစ်မလဲ အစ်မစောင့်ကြည့်နေမယ် မကြင်နာဘူးဆိုရင် နောက်တစ်ခါ ဒီလိုမျိုး interview မှာ ထပ်ပြီးပြောအုံးမှာပါ”လို့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ဓမ္မတာလာချိန်ဖြစ်တတ်တဲ့ စိတ်ကို ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်
“ဒီလိုကိစ္စကိုက မကြုံဖူးလို့ နားမလည်လို့ ပြောတာဖြစ်တဲ့ အတွက် ယုံရလည်း ခက်မယ်လေ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တောင် ကိုယ့်ဘာသာကို သိနေတယ် ဘာမှ အကြောင်းအရာလည်း မရှိ ဝမ်းနည်းစရာလည်း မရှိပဲနဲ ငိုချင်နေတယ် ဘာမှမဟုတ်တဲ့ အဖြစ်သေးသေးလေး စိတ်တိုစရာမဟုတ်တဲ့ဟာကို ပေါက်ပြီးတော့ ထုခွဲလိုက်တဲ့ထိကို စိတ်တိုသွားတဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း နားမလည်ဘူးဆိုတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတောင် ဒီလို နားမလည်လောက်အောင် ဒီလိုမျိုး စိတ်တွေဖောက်ပြန်တာက ဘေးနားက တစ်ခါမှ မကြုံဖူး မဖြစ်ဖူးတဲ့ လူဆိုလို့ရှိရင် ဘယ်လိုလုပ်ပြီး နားလည်နိုင်မှာလဲ ဆိုတာကို အစ်မတို့ ကိုယ်ချင်းစာပြီးတွေးပေးလိုက်ပါတယ် ဒါကတော့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း ကြုံတဲ့အတွက် ကိုယ်ချင်းလည်းစာပါတယ် အစ်မတို့ Gymမှာ ဆိုလို့ရှိရင် အမျိုးသမီးတွေအတွက် အမျိုးသမီး ဓမ္မတာ စက်ဝိုင်းကို တစ်ခါထဲထည့်ပေးထားပြီးတော့ အစ်မတို့ Gymမှာ fitness Diaryဆိုပြီးတော့ ရှိတယ် ကိုယ်တစ်နေ့ တစ်နေ့ ဘာတွေစားလဲ ဘာတွေသောက်လဲ အိပ်ချိန်က ဘယ်လောက်လဲ ရေဘယ်လောက် သောက်ထားလဲ ဘာတွေ ဘာတွေ workoutလုပ်ထားလဲ အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံး workoutလုပ်ထားတဲ့ အစ်မတို့ရဲ့ အမျိုးသား trainer များတာပေါ့နော် ဒီအမျိုးသားtrainerတွေနဲ့ အားကစားလာလုပ်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေနဲ့ သေချာထိုင်ပြီးတော့ ဆွေးနွေးရတယ် အဲ့အချိန်ကျလို့ရှိရင် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဒီဓမ္မတာလာတဲ့ ကိစ္စဘယ်ရက် ဘယ်ရက် ရောက်နေပြီဆိုတဲ့ စက်ဝိုင်းလေးမှာ မရှက်မကြောက်နဲ့ ဆွေးနွေးကြတယ် တစ်ခါတစ်လေကျတော့လည်း အမျိုးသမီးတွေက အခွင့်ကောင်းယူချင်တာပေါ့ ဒီနေ့ကတော့ ဟိုဟာလာမှာမလို့ မလာတော့ဘူး အလုပ်မလုပ်ချင်ဘူးပေါ့ အဲ့ကျတော့လည်း အစ်မတို့ဆီက အမျိုးသားtrainerတွေက အရမ်းကို ကြောက်ပြီးတော့ ရှက်ပြီးတော့ ဒါက ဖြစ်နေလည်း လုပ်လို့ ရတယ်။
အစ်မကိုယ်တိုင် ပျင်းနေလို့ မလုပ်ချင်ဘူးဆိုလည်း ဒီရက်တော့ နားပေးလို့ ရပါတယ် ဒါပေမယ့် ဒီဟာကို အကြောင်းပြပြီးတော့ အခွင့်ရေးယူချင်လို့ လေ့ကျင့်ခန်း မလုပ်ချင်ဘူးလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မလိမ်နဲ့ပေါ့ အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့ အစ်မတို့က နားလည်းလည်ပေးတယ် ပိုပြီးတော့လည်း supportလုပ်ပေးတယ် ပြီးတော့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ဆိုရင်လည်း တကယ်မလုပ်နိုင်တဲ့ နေ့တွေဆိုရင် အစ်မ ရာသီလာနေတဲ့ အချိန် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လို့ ရလား တို့ဘာတို့ ဆို အစ်မအဖြေကတော့ အမြဲတမ်း တူတူပါပဲ ကိုယ်လုပ်နိုင်သလောက်လေးကို ရာသီလာတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ် မလာတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်နိုင်သလောက်ကိုပဲ လုပ်ပါ မနိုင်တာကို ဒီထက်ပို မလုပ်ပါနဲ့လို့ အဲ့တော့ ကိုယ်နားချင်တယ်ဆိုရင် နားဖို့အခွင့်အရေးက ယောက်ျားလေးတွေဆီမှာ မရတဲ့ အခွင့်အရေးမလို့ ယူပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်”ဆိုပြီး သူမရဲ့ Gymမှာ တွေ့ကြုံရတဲ့ လာကစားတဲ့သူတွေအကြောင်းလည်း ပြောပြသွားခဲ့ပါတယ်။
“ကျန်းမာရေးအတွက် ဒီအသားအရေကြည်လင်ဖို့ ခန္ဓာကိုယ် အချိုးအစား ဒါတွေအကုန်လုံးက ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ရှိတဲ့ ဟော်မုန်းတွေက ထိန်းချုပ်ထားတာပါ အဲ့တော့ ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ရှိတဲ့ ဟော်မုန်းတွေကို အပြင်က Chemical ဟော်မုန်းတွေနဲ့ မရောနှောပါနဲ့ မနှောင့်ယှက်ပစ်ပါနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ ဟော်မုန်းတွေက ညီညီမျှမျှနဲ့ လိုသလောက် လည်ပတ်နေဖို့အတွက် အဓိက အရေးကြီးတာကတော့ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ဖို့ပါပဲ အသားအရေကြည်လင်ဖို့ ဆိုတာလည်း ဒီဟော်မုန်းတွေက ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ အတွက် လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်တာဟာ အသားရေအတွက်ရော ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားအတွက်ရော ကျန်းမာရေး ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာ လိုအပ်တဲ့ကျန်းမာရေးအတွက် နုပျိုဖို့ ကြီးထွားမှု ဒါတွေအကုန်လုံးကို ထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့ အတွက် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့ ရေများများသောက်ပါ ပြီးတော့ အသားရည်အတွက်ရော အရိုးတွေ အတွက်ရော သန်မာပြီး စိုပြေနေဖို့အတွက်က နို့စစ်စစ်ကိုသောက်ပါ ဒီနို့စစ်စစ်ထဲမှာ ပါတဲ့ ကောင်းတဲ့ bacteria တွေက လူရဲ့ နုပျိုမှုကို အရမ်းအထောက်အကူပြုပေးထားပါတယ် အဲ့တော့ ရေသောက်ပါ နို့သောက်ပါ stressမများပါစေနဲ့ အိပ်ရေးဝဝ အိပ်ပါလို့” ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး အကြံပေးသွားခဲ့ပါတယ်